पत्रकारिता भित्र मौलाएको विकृतिको अन्त्य सम्भव छ त ? — donnews.com
पत्रकारिता भित्र मौलाएको विकृतिको अन्त्य सम्भव छ त ?
यदि एउटा अपराधीले प्रहरीको बर्दी र उपल्लो तहको जिम्मेवारी पायो भने के–के गर्ला ? पक्कै पनि त्यस अपराधीले बर्दी र जिम्मेवारीको चरम दुरुपयोग गरेर आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि गर्न नहुने सबै काम गर्छ नै । हामीलाई यो विषय कल्पना गर्दा पनि कहाली लाग्छ । तर यस्तै अपराधी र विकृत मानसिकता बोकेर पत्रकारिताको आवरणमा समाजमा विकृति फैलाउनेहरुको जगजगी बढिरहेको छ । यसतर्फ सोच्नु पर्ने समय आएको छ । अपराधमा राजनीति मिसिएर जति डरलाग्दो स्थिति बनिरहेको छ, त्यसैगरी पत्रकारिता भित्र पनि घिनलाग्दो स्थिति देखा परिरहेको छ । अरुका विषयमा कलम चलाउने पत्रकार र पत्रकारिता जगतका विषयमा यतिबेला नबोल्ने हो भने न्याय र ईमान्दारिताको गला रेटिने छ र चर्को स्वर यिनै अपराधीहरुको सुनिने छ ।
एउटा पत्रकारले कति तलब पाउँछ ? अब आमजनताले यो विषय सोध्न जरुरी छ । विकृतिको जडको शुरुवात र पहिचान यहीँबाट गर्न सकियो भने अन्त्य सम्भव छ । पोखरा कैं सन्दर्भमा भन्ने हो भने यहाँका सम्पूर्ण पत्रकारहरुलाई हाम्रो समाजले नियाल्न जरुरी छ । एउटा सञ्चारमाध्यमले मासिक १५ देखि ३० हजार रुपैयाँ भन्दा बढि तलब दिन सक्दैन । ३० हजार रुपैयाँ भन्दा बढि तलब खाने पत्रकारहरु औंलामा गन्न मिल्ने छन् । नत्र १५ हजार मासिक तलबमा पत्रकारहरुले आफ्नो समय खर्चिरहेका छन् । कतिपय राष्ट्रियस्तरका सञ्चारमाध्यमहरुमा काम गर्ने पत्रकारहरुले त बषौंसम्म पनि तलब नपाईकन काममा लत्रिरहेका छन् । एउटा सच्चा पत्रकारलाई आफ्नो मासिक खर्च धान्न धौं धौं छ । तर केही पत्रकारहरुलाई करोडौं थुपार्ने र लाखौं उडाउने पैसा कसरी आउँछ ? यसको खोजी हुन आवश्यक छ । सिधै अपराध र अपराधीहरुसँगको सञ्जालसम्म पुग्छ यसको लहरो । हामी यो लहरो भत्काउन चाहन्छौं र समाजमा उदाङ्दो बनाएर ईमान्दार, स्वाभिमानी र असल पत्रकारको शिर उचोँ भएको हेर्न चाहन्छौं । पत्रकारिता जगतलाई बदनाम हुनबाट जोगाउन चाहन्छौं ।
एकजना पत्रकारले पत्रकारिता जगतमा देखिएको विकृतिका विषयमा लेख नै लेखेका थिए । उनले आफ्नो लेखमा यहाँ दुई प्रकारका पत्रकार छन् भनेर पत्रकारिता भित्रको विकृतिलाई स्पष्ट पारिदिएका छन् । अक्षर र भाषासँग खेल्ने पत्रकार एकथरीका । अनि अक्षर र भाषा बाहेक सबैसँग खेल्ने अर्को थरीका । यिनीहरुको हैसियत फरक पर्छ भन्ने अभिव्यक्तिबाट पनि हामीले पत्रकारिता भित्र मौंलाएको विकृतिलाई बुझ्न सक्दछौं । को बोल्छ त पत्रकारिता भित्रको विकृतिको विरुद्धमा ? कोही बोल्न खोज्यो भने कलम बोक्नेले जे पनि लेखिदिन सक्छ भने डर छ समाजलाई । नेताहरु आफ्नै भ्रष्टचारको दलदलमा छन् । उद्योगी व्यवसायीले घरमा कुकुर पाले झैं आ–आफ्ना पाल्तुपत्रुकारहरु पालिरहेका छन् । तस्कर, गुण्डा र ठेकेदारहरुका पनि आ–आफ्ना पत्रुकारहरु छन् । उनीहरुलाई केही समस्या प¥र्यो भने राजनीतिक र प्रशासनिक सबैसँग सेटिङ मिलाउने धन्दा यिनै पत्रुकारले गर्छन् । त्यसकारण पत्रकारिता भित्रको विकृतिसँग जुध्न हत्तपत्त कोही चाँहदैन । सबैलाई थाहा छ वास्तविकता तर मुख खोल्न सक्दैनन् । तर अब बोल्नुपर्छ । यस्ता पत्रकारिताको आवरणमा गरिने गलत धन्दालाई पर्दाफास गर्नैपर्छ । समाचार किनबेच गर्ने, बार्गेनिङ गर्ने, धम्की दिने पत्रुकारहरुलाई अब नङ्ग्याउनै पर्छ । कलम बोक्दैमा जसले जे मन लाग्छ त्यही गर्ने छुट हामीलाई छैन । अब हरेक पत्रकारको आम्दानीको स्रोतको खोजी गर्नैपर्छ । पत्रकारिता क्षेत्रको गरिमा र महत्वलाई बचाई राख्न हामी भित्रको विकृति र गलत धन्दाको चिरफार गर्नैपर्दछ । नत्र पत्रकारिता र गुण्डागर्दीमा केही भिन्नता रहने छैन ।